Digniin ku socota P3D users
Digniin ku socota P3D users sano 2 2 bilood ka hor #1067
Waqtigaan la joogo waxaan hubaa in qaar badan oo idinka mid ahi ay ka maqasheen Dovetail kansalimey Flight Sim World (FSW) Kama hadli doono sababaha aan u arko inaan barnaamijkan ku guuldareystay. Waxa walaaca laga qabaa waa dhacdooyinka ka dhacay bogga FSW ee facebook 2dii bilood ee ugu dambeysay ka hor intaysan joojin badeecada. Maalinba maalinta ka dambeysa Dovetail iyo FSW waxay isku dayayeen inay iibka helaan. Xaqiiqdii iyagu waxay ka hadlayeen mustaqbalka qalabkooda duulimaadka 2 maalmood ka hor inta aysan ku dhawaaqin in badeecada aan la sii horumarin doonin.
Sidaa daraadeed waxa igu saabsan waa Dovetail waa in ay horay u soo gebogebaysato at this point in ay u socdeen in ay soo jiid garabka. Waxay isku dayayeen inay lacag badan qaataan ka hor intaadan cid kale nacas ku sameynin si ay u qaniinaan. Tani waxay noqon doontaa isku day lagu doonayo in laga qaado qiimaha ay ka iibsadaan xuquuqda madadaalada ee Microsoft. Dhab ahaantii waxay haystaan ​​FSW si ay ugu iibiyaan khamriga illaa Maajo 24th. Maxay taasi kuu sheegaysaa?
Cabsigaygu waa, waxay isku dayi karaan inay tagaan Lockheed Martin ka dib markaan hirgelin ruqsaddooda si ay dib ugu soo celiyaan khasaare intaas ka badan iyaga oo sheeganaya inay ku guul darreysteen FSW. Tani waxay khasab ku noqoneysaa Martin Lockheed inuu qaado mid ka mid ah Liisanka Waxbarashada wuxuuna dhaawici karaa isticmaaleyaasha dhammaadka badan ama waxay kordhinayaan qiimaha si ay u bixiyaan sheegashooyinka dhaawaca Dovetail.
Dovetail waa wasakh weyn oo bulshadeena ah waxayna waxyeelo u gaysteen hiwaayadeena mar hore. Xulashada kale ayaa ah in Lockheed lagu qasbo inuu jiidayo jiinka mashiinka kale ee ESP ee jilitaanka duulimaadka. Hadday taasi dhacdo, X Plane wuxuu noqon doonaa keli kaligii ee Duulimaadka Duulimaadka PC. Noocan oo kale ah wuxuu u noqon karaa mid aad u xun dhamaadka adeegsadaha. Waxaan u baahanahay ugu yaraan labo shirkadood oo jilitaanka duulimaadka ah si ay u jiraan, si kor loogu qaado tartan caafimaad leh, iyo sii wadida horumarka dhinac saddexaad
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: pauand2, donran1
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray DRCW. Sababta: Ha iloobin inaad sheegto soo-saareyaasha saddexaad
Digniin ku socota P3D users 2 sano 1 bil ka hor #1090
Ive wuxuu yidhi isla wixii, waa nooc aan caadi ahayn ka dib markaan la joogay FSX iyo barashada barnaamij ka socda dhulka ilaa wixii ka dambeeya maxaa jira? toban sano. In yar oo naga mid ah ayaa ogaatay ku dhawaad ​​hal sano ka hor inta uusan GameSpy dhaafin inay taasi dhici doonto. Xaaladdaani waa mid aad u lamid ah tan aad haysato oo badan oo ku hanjabaya warshadaha dhaqdhaqaaqyo anshaxeed. Waxaan wali shakhsiyan aaminsanahay in ka badan milyan ee saacadaha nin qaatay qaadashada madalkan heerka ay hadda tahay sifooyinka suurtagalka ah ee inta ugu badan ee 28% ee payware diyaaradaha 40% si loo siiyo muuqaal qurux badan inta soo hartayna waxay ahaayeen kuwa kale oo dhan oo xorta kujira iyo wadaagida taasi oo runtii gelisay heerka ugu sareeya iyo dadaalka. Waxaa jira gefyo fara badan oo loo geysto goobta dhaqaalaha. Ma doonayo inaan sheego magacyada, laakiin taasi waa inaan ilaaliyo boggan oo aan wax shaqo ah ku lahayn bayaanka. Waxaad leedahay shirkad soo saarta lacag aad u fiican, oo haa waxaa jira waxyaabo badan oo dhalaalaya oo ku jira dagaalkan diyaaradda quruxda badan iyo waxa hubka nool ku jira, AMMAANO inaad ku dallacdo dadka isticmaala / iibsada khidmadyo cusub iyo koodh sanad walba wixii aad soo iibsatay ka dibna xaqiiqda aad tahay waxaa loo diraa baraha kulanka si jawaab looga helo. Waxay sameeyaan lacagta aan uga jawaabno su'aalaha iyo xallinta arrimaha ay tahay inay sharci ahaan xalliyaan. Waxaan oggolaan lahaa in la helo deg deg, FSXA FSX Gold FSX, waxaa jira degel internet ka ah oo qof walba uu aad u yaqaana, ay leeyihiin FSX Dahabka lagu iibinayo wax ka badan $ 200.00 US. Taasi waa musiibo dhab ah. Laakiin markaa waxa jira goobo ka sarreeya sida tan oo siinaya shuruc ku saabsan waxa socda oo wax walba oo suurta gal ah ka dhigaya inay si fudud wax u fahmaan oo had iyo jeer wax u hagaajiya. Waxaan ku calaamadinayaa mid ka mid ah bogagga keliya ee weligii lagu arkay sannadihii TEN si aad wax u weydiiso, Maxaad jeclaan lahayd inaad aragto oo kor loo qaaday, hadda waa mid gaar u ah maalintan iyo da'da. Waxaan mahad ballaaran u siinayaa kuwa inaga horreeyay oo dhan ka dib naga daba socon doona si aan u sii noolaan karno, oo aan u sii wadno barashada cilmiga iyo ka baxsan barnaamijyada si loo barto farsamooyinka. Naqshadaynta Duulista ayaa keentay in shakhsiyaad badan ay soo galaan warshadaha hawada marka loo eego taarikh kasta oo kale. Intooda badan kuwa halkan tagayaa waxay ku dhacayaan dugsiga duulimaadka. Mustaqbalka duulimaadka sim uma muuqdo mid caajis ah, kaliya kuwa xoogan ayaa ku noolaan doona warshadaha sababtoo ah kuwa ku yimaada kaliya faa'iido iyo naftooda oo kaliya maskaxda ku haya ee ma ahan kuwa abuura duulimaadka diyaaradaha, adeegsadayaasha, horumariyaasha iwm, oo ha bartin dhageysiga Duulimaadyada dadweynaha waa la waayayaa, waan kuu xaqiijin karaa taas. Waan xasuusan karaa markii ugu horreysay ee duulimaadkii MS uu soo baxay, waxay ahayd mid cusub oo ay ka sarreysay, haddana hadda dib ayaan u eegay barnaamijyadaas iyada oo aasaasku ahaa sidii PONG ahaan safka hore uga jirtay. Dhisida aasaas adag oo taageeri doona guriga, adkayn ku filan oo iskufiican oo aad ku maarayn karto waxkasta oo aan ahayn hal, maxaa yeelay hadaadan wax hal ah kuu soo dejinaynin guriga, Waad ku mahadsantahay RIKOOOO meel wanaagsan, Meel aan way isu tagi karaan oo sim ka dhigi karaan meel fiican weli. Hayso duulimaad aamin ah.Semper Fidelis. Haddii lifaaqaas muujiyo, ogaada sawiradda sawiradda muuqaalka '300G intel duo' oo ku saabsan 7 sano jir daaqadaha 7
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: DRCW, donran1
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.188